Ma ku fekersan tahay inaad degmada Bräcke ka shaqaysato? - PDF
Download "Ma ku fekersan tahay inaad degmada Bräcke ka shaqaysato?"
1 Somaliska Sannooyinka soo socda waxaa degmada Bräcke iyo degmooyinka agagaarkeeda ku yaalaan looga baahnaan doonaa xirfad-yaqaanno tiro badan sida, takhtarro, macallimiinta dugsiyada xannaanadda, shaqaalaha makhaayadaha, cunto kariyeyaal, farsameyaqaanaha biraha iyo koronto-yaqaaneyaal. Ma ku fekersan tahay inaad degmada Bräcke ka shaqaysato? Kaddib markii ruqsadda degenaanshada dalka Iswiidan lagu siiyo, waxaa muhim ah inaad hoy iyo shaqo hesho, oo aad ka hesho degmo adiga iyo qoyskaaga ka heshaan. Haddii aad ka diiwan gashan tahay Xarunta Shaqada oona ka tirsan tahay qorsheha sal-dhigida [Etableringsuppdraget], waxaa caawinaad ka heli karta Xarunta Shaqada. Waxay hoy kaaga heli kartaa degmada ugu fursad wanaagsan oo aad shaqo ka heli karto. Haseyeeshe, iskaaga ayaa guri u raadsan kartaa. Warbixin dheeraad waxaad kala xiriiri kartaa shabakadda internetka ee Xarunta Shaqada Arbetsformedlingen.se/otherlanguages. Waxaad halkaas ka heleysaa shabakadda internetka ku qoran labaatanmeeyo luqad. Teeda kale, waxaad khadka taleefanka kula xiriiri kartaa gacanhaayeha Xarunta Shaqada, kan ku hadla af-carabi: tal , af-soomaali: tal , af-tigriigna: tal: Goorta Xarunta Shaqada ama maamulka Dowladda hoose la xiriirayso waxaad xaq ku leedahay in qof turjubaan ah lagugu yeero. Qoraal-warbixineedkaan wuxuu maamulka Dowladda hoose Bräcke iyo Xarunta Shaqada iyadoo kooban ku wargelinayaan fursadaha qofka cusub u degmada Bräcke ku leeyahay.
2 Fursadaha iyo adeegyada laga helo waqooyiga dalka Iswiidan Maamulka Dowladda hoose ayaa adeeg bulshodeedka degmada aad degan tahay badidiisa mas uul ka ah. Dalka Iswiidan wuxuu leeyahay degmooyin yaryar iyo kuwa waawayn ba, kuwaasoo tiradooda garayso 290. Qof kasta wuxuu xaq ku leeyahay in adeeg la siiyo, iyadoo fiirogaar ah aan la siin nooca degmada u ku nool yahay magaallo ama tuullo. Sidaas awgeed, qofku wuxuu had iyo jeer heli karaa waxbarasho iyo daryeel-caafimaadeed iyadoo fiirogaar ah aan la siin nooca degmada u ku nool yahay. Hab sahlan ayuu qofku ubadkiisa xannaandda u geyn karaa oona ugu soo kaxayn karaa. Maadaama wax kasta u ku dhow yahay wax kadeedis ah ma jiro. Waxaa sidaasi tiri Eden, hooyo keligeed ah oo dalka Eritrea u dhalatay. Magaallo yar ku taallo waqooyiga dalka Iswiidan ayay ku nooshahay. Miyiga iyo waqooyiga dalka Iswiidan wuxuu u baahan yahay shaqaale. Waxaa kaloo halkaan laga hela fursad u qofku waxbarashadiisa ku sii wato. Dadyoowga dalka cusub waxaan siinna fursad iyadoo aan shaqo siinno, taasoo bulsha idil faa iido ugu jirto. Sannooyinka soo socda waxay dadyoowga dalka ku cusub noqon doonaan shaqaalaha gobolka uu baahan yahay. Adam, oo ah loo shaqeeye waqooyiga dalka Iswiidan. Dadyoowga dhowaan dalka yimi oo tiro badan oo ku nool waqooyiga dalka Iswiidan way ka helaan halka ay ku nool yihiin mana doonayaan in ay ka guuraan. Anigu waxay ii la tahay in dadyoowga dhowaan dalka yimi u fiican tahay, in noolashooda cusub ay ku bilaabaan degmooyinka yaryar, maxaayeelay tartanka shaqada iyo waxbarashada sidaas uma culusa. Chillida, 21 jir, ka yimi dalka Namibia Shan bilood kaddib waxaan dhameeyay barashada luqada ee loo yaqaanno (sfi). Qofka degmooyinka yaryar ku nool hab dhaqsi badan ayuu bulshada dalka Iswiidan u la qabsan karaa. Anigu waxaan lee yahay saaxiibo iswiidish ah oo aan kubbada cagta toddobaadkii hal mar la ciyaaro. Osman, wiil dhallinyaro oo dalka Eritrea u dhashay. Anigu berry hore waxaan ku noola magaallo wayn ku taallo konfurta dalka Iswiidan, laakinse imminka waxaan ku noolahay magaallo yar ku taallo waqooyiga dalka Iswiidan. Wax kasta mudo yar ayaan ku dhamaysan karaa halkan. Markii shaqada cusub aan helay, laba maamood kaddib wax kasa waa la diyaar gareeyay. Minas, 28 jir ka yimi/timi dalka Suuriya. Ku saabsan degmada Bräcke Degmada Bräcke waxay ku taalla bartamaha dalka Iswiidan ee gobolka Jämtland, waxaana qiyaastii ku nool qof. Degmada Bräcke waa degmo wejiyo kala duwan leh, buurar dhaadheer, toggag bilic leh iyo haro leh biyo kalluumaysi fiican leh. Degmada Bräcke waa degmo nool oo leh gancsi iyo ururro firfircoon. Booqashayaasha degmada Bräcke waxay degmada u booqdaan, dabeecadda darteed iyo hawada dibada ku salaysan noolasha dalxiisnimada iyo dadka ku nool. Dhaqdhaqaaqyada dabeecadda ee degmada Bräcke laga helo waxaa kamid ah, ciyaaraha barafka sida [skidåkning, skridskoåkning], jidad lagu socsocdo, ugaarsasho, gurashada miraha iyo boqoshaa. Guryahada Bräcke Noocyaha guryaha degmada Bräcke way kala duwan yihiin. Waxaa laga hela guri-dabakheed ka kooban hal qol iyo jiko ilaa kuwa ka kooban afar qol iyo jiko. Waxay ku kala yaalaan degmooyinka Bräcke, Gällö, Pilgrimsstad iyo Kälarne. Heerarka kirada waa inta u dhaxaysa karoon/bishii guri-dabakheedka halka qol ka kooban ilaa karoon/bishii hela guri-dabakheedka afarta qol ka kooban. Haddiise aad iibsato guri-dabakheed ama gurigaaga qiimaha aad ayay ugu hooseeyaan haddii la barbardhigo kuwa magaalooyinka waawayn.
3 Degmada Bräcke iyo degmooyinka agagaarkeeda waxaa laga heli doonaa shaqooyinja sida alxan iyo garaash. Baahida wayn ee shaqaalaha loo qabo Degmada Bräcke waxaa ku yaalaan shirkado yaryar ka ganacsada alwaaxyada iyo biraha. Dadyoowga degmada ku nool badidooda waxay ka shaqayaan ganacsiga kaynta, sida ka nadiifinta, jarida geedaha iyo farsamaynta waxyaalaha alwaaxa ka samaysan. Degmada waxay kaloo caan ku tahay farsamaynta raashinka heerka sare ah. Sannooyinka soo socda waxaa degmada Bräcke iyo degmooyinka agagaarkeeda ku yaalaan looga baahnaan doonaa xirfad-yaqaanno tiro badan sida, shaqaalaha makhaayadaha, cunto kariyeyaal, taktarro, macallimiinta dugsiyada xannaanadda, farsameyaqaanaha biraha iyo koronto-yaqaaneyaal. Waxaa la heli doonaa fursad shaqo laga helo laamaha xannaanadda iyo daryeel-caafimaadeedka, ganacsiga kaymaha, alxame iyo garaash iyo gaadiidka. Xarunta Shaqa da wuxuu awooda in goob aan degmada Bräcke ka fogeyn ka helo waxbarasho badan oo kala duwan iyo waxkaqabadyo sare u qaadi doono fursadda shaqo helida. Tusaale ahaan, tababarka xannaanadda iyo daryeel-caafimaadeedka, farsamada alxanka iyo macdanta, gaadiid, shaqaalaha bakhaarada, farsameyaqaanaha garaashyada, makhaayadaha, ganacsiga waxiibinta iyo adeegga macaamiisha. Xarunta Shaqada waxay kaloo ku suurtagelin kartaa helida tababarka goobaha shaqada. Taasoo ku suurtagelin doonto helida khibrad qiimo leh suuqa shaqada dalka Iswiidan, iyo fursad aad ku layliso luqada iswiidishka. Warbixin dheeraad waxaad ka heli kartaa shabakadda internetka ee Xarunta Shaqada: arbetsformedlingen.se Waxbarashada iyo waxbarashada xirfadaha ku salaysan Qofka da diisa u dhaxayso 20 ilaa 64 sano wuxuu dugsiyada dadka waawayn ee Dowladda hoose Bräcke ku dhamaystiran karaa waxbarashada Dugsiyada biloowga/hoose/dhexe ama dugsiga sare. Ama wuxuu dhigan karaa waxbarashada xirfadaha ku salaysan. Lärcenterum degmada Bräcke waxaa laga helaa koorsooyin iyo waxbarasho tiro badan. Qofku wuxuu wax baran karaa wakhi buuxa ama nus wakhti. Wuxuu isku wadi kara shaqo iyo waxbarasho. Talo-bixin iyo su aalaha taageerada waxbarashada waxaa lagala xiriiri karaa hogaamiyeha wadada waxbarashada ee Lärcenterum. Degmada Östersund, oo degmada Bräcke u jirta qiyaastii 70 km, waxaa ku yaallo jaamacadda Mittuniversitet, taasoo ah jaamacadda ugu dhow. Waxaa jaamacadas laga hela waxbarashada kala duwan oo badan. Warbixin dheeraad waxaad ka heleysaa shabakadda internetka miun.se.
4 Degmada Bräcke iyo degmooyinka agagaarkeeda ku yaalaan, waxaa la heli doonaa fursad shaqo laga helo laamaha gaadiidka, daryeel-caafimaadeedka iyo xannaanadda iyo ganacsiga kaymaha. Is-gaarsiinta iyo gaadiidka Degmada Bräcke waxay ku taalla aagga wadada E 14 laakinse bartamaha traafikada kuma taallo. Magaalada Östersund waxaa loo socda hal sac oo baabuur ah, magaalada Sundsvall waxaa loo socda hal sac iyo bar oo baabuur ah, magaalada Stockholm waxaa loo socda shan saacadood oo baabuur ah. Gaadiidka baasaska iyo tareenada ayaa maalin kasta la hela, oo ka dhex shaqeeya magaalooyinka waawayn sida Östersund, Sundsvall, Umeå iyo Stockholm. Qofka degan Bräcke wuxuu shaqo maalin kasta u tegi karaa Östersund. Tareenka wuxuu u socda 40 daqiiqo. Barashada luqada iswiidishka iyo dugsiyada carruurta iyo dhallinyarada loogu talagalay Qofka afkiisa hooyo aan ahayn af-iswiidish, waxay Dowladda hoose siinaysaa fursad u ku dhigto waxbarashada aasaasiga ee af-iswiidishka, iyadoo barashada luqada iswiidishka ee soo-gaaleetiga loogu talagalay (sfi). Xilka Dowladda hoose ugu muhimsan waxaa weeyaan in carruurta da dooda u dhaxayso 1 ilaa 6 sano ay siiyaan fursad ay ku dhigtaan dugsiga xannaanadda. Xaaladaas waxay waalidiinta helayaan in ay waxbartaan ama shaqaystaan. Degmada Bräcke waxaa ku yaallo dugsiga xannaanadda oo tiradooda ah afar. Xilliga sugitaanka booska waa ugu badnaantii laba bilood. Degmada Bräcke waxaa ku yaallo Dugsiyada biloowga/hoose/dhexe oo tiradooda ah afar, kuwaasoo loogu talagalay carruurta dhigata fasallada 1-9. Waxaa ku yaallo hal dugsi sare iyo saddex maktabo. Dugsiga sare ee degma Bräcke waxaa laga hela waxbarashada korontada iyo tamarta iyo farsameyaqaanne. Kuwa kale waxaa laga hela magaalada Östersund. Jihaynta bulshada Dhammaan dadyoowga dhowaan dalka yimi iyo shisheyeyaasha u soo guura degmada Bräcke waxaa la siiyaa jihaynta bulshada. Warbixin iyo caawinaad isku qorida waxaa laga hela xiriiriyeha Dowladda hoose ama Xarunta Shaqada. Isku-qorida waxaa kaloo laga hela shabakadda internetka Dowladda hoose: bracke.se Adeegygada iyo wakhtilummiska Degmada Bräcke waxaa ku yaal rugta daryeel-caafimaadeedka, rugta daryeel-caafimaadeedka carruurta iyo rugta daryeel-caafimaadeedka ilkaha. Isbitaalka gobolka wuxuu ku yaalla magaalada Östersund. Degmooyinka yaryar ee Bräcke waxaa ku yaalaan dukaaman yaryar. Kuwaasoo kamid ah kuwa raashinka iibiya, bangiyo, kuwa ubaxa iibiyo, kuwa ka ganacado dharka isboortiga iyo wakhtilummiska, kuwa biraha iyo rinjiyada iibiya. Magaalada Östersund waxaa ku yaalaan dukaaman waawayn. Degmada waxay leedahay ururro firfircoon sida kuwa isboortiga, Lanqayrta cas leh dukaan waxyaalaha dugga lagu iibiyo, urrurka Röda Barnen, ABF, kuwa diini ah oo kala duwan. Kiniisadda dalka Iswiidan tullooyinka badidooda way ku yaalaan. Kiniisada Baptist iyo Elim-kapel ku yaalaan degmada Bräcke. Magaalada Östersund oo hal sac baabuur degmada Bräcke u jirta waxaa ku yaallo hal masjid.
5 Warbixinta xiriirka Xarunta Shaqada Bräcke Adreeska booqashada: Norrlandsgatan 21, Bräcke Adreeska boostada: Box 99, Bräcke arbetsformedlingen.se/bracke Xiriiryeyaasha Maria Lovefjell, Marita Linna-Lindgren, Gacanhaaye sal-dhigida Bräcke Gacanhaaye sal-dhigida Bräcke Tal: Tal: E:mail: E:mail: Teeda kale, waxaad khadka taleefanka kula xiriiri kartaa gacanhaayeha Xarunta Shaqada, kan ku hadla afcarabi: tal , af-soomaali: tal , af-tigriigna: tal: Bräcke kommun Adreeska booqashada: Ängevägen 10B Adreeska boostada: KULTIZ box 190, Bräcke Shabakadda internetka: bracke.se bracke.se/barnutbildning Xiriiryeyaasha Åsa Hedenström Boije Agnes Wagroda Tal: Tal: E:mail: E:mail: Ururrada degmada/gobolka ka hawlgala Ururka muslimiinta Östersund Alliance Francais c/o Kholod Mahmood Björkvägen 17 Stenåldervägen FRÖSÖN ÖSTERSUND Kiniisadyaasha iyo is-bahaysayaasha Bräcke Baptistförsamling Bräcke-Nyhems församling c/o Marianne Karlsson Kyrkvägen 21, BRÄCKE Postgatan 6, BRÄCKE Tal: Tal: , E:mail: shabakadda internetka: kyrktorget.se/elim.bracke.se Revsunds församling Sefastvägen 1, GÄLLÖ Tal: E:mail: Shabakadda internetka, Bräcke Kommun dalka larcentrum.se bgy.se rb.se/bracke.se kommun.redcross.se/bracke.se Warbixin dheeraad dadyoowga dhowaan Iswiidan yimi loogu talagalay informationsverige.se
6 Masawir: Johnér Bildbyrå, Linda Broström, Leif Milling